Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Precision Granite Solutions Warshada
Saxnimada Granite Tri Square Ruler
Anagoo ka horrayna isbeddellada warshadaha ee caadiga ah, waxaan ku dadaaleynaa inaan soo saarno labajibbaaran granite saxan oo tayo sare leh. Isticmaalka ugu fiican ee Jinan granite madow sida alaabta ceeriin, labajibbaaran saddex-geesoodka granite ee saxda ah ayaa sida ugu habboon loo isticmaalaa si loo hubiyo saddexda isku-duwayaasha (ie X, Y iyo dhidibka Z) ee xogta spectrum ee qaybaha la farsameeyay. Shaqada Granite Tri Square Ruler waxay la mid tahay Granite Square Ruler. Waxay ka caawin kartaa qalabka mashiinka iyo isticmaalaha wax soo saarka mishiinka si ay u sameeyaan kormeerka xagal saxda ah iyo wax ku qorida qaybaha / workpieces iyo cabbirka siman ee qaybaha.
Granite V-Block waxaa si weyn loogu isticmaalaa aqoon-is-weydaarsiyada, qolalka qalabka & qolalka caadiga ah ee codsiyada kala duwan ee qalabaynta iyo ujeeddooyinka kormeerka sida calaamadaynta xarumaha saxda ah, hubinta xooga saarida, isbarbardhigga, iwm. qaybo cylindrical ah inta lagu jiro kormeerka ama wax soo saarka. Waxay leeyihiin 90-degree “V” magac ahaan ah, oo dhexda ku leh oo barbar socda xagga hoose iyo labada dhinac iyo labajibbaaran ilaa darafyada. Waxaa lagu heli karaa cabbirro badan waxaana laga sameeyay granite-madaw ee Jinan.
Waxaan soo saari karnaa isbarbaryaal granite sax ah oo leh cabbir kala duwan. 2 Waji (oo ku dhammaatay cidhifyada cidhiidhiga ah) iyo 4 Waji (dhammaan dhinac walba ah) noocyada ayaa diyaar u ah sida Fasalka 0 ama Fasalka 00 / Fasalka B, A ama AA. Isbarbardhigga Granite ayaa aad faa'iido u leh samaynta qalabka farsamaynta ama wax la mid ah halkaasoo gabal tijaabo ah ay tahay in lagu taageero laba sagxadood oo siman oo siman, asal ahaanna abuuraya diyaarad fidsan.
Garsoorka Toosan ee Granite oo leh 4 sagxadood oo sax ah
Granite Toosan Ruler sidoo kale loo yaqaan Granite Straight Edge, waxaa soo saaray Jinan Black Granite oo leh midab aad u fiican iyo saxsanaan sare oo aad u sarreeya, oo leh qabatinka buundooyinka saxda ah ee sare si loo qanciyo dhammaan baahiyaha isticmaale ee gaarka ah, labadaba aqoon isweydaarsi ama qolka mitirka.
Taarikada dusha sare ee granite madow waxaa loo soo saaray si sax ah si waafaqsan heerarka soo socda, iyada oo la qabatimo buundooyin sax ah oo sarreeya si loo qanciyo dhammaan baahiyaha isticmaale ee gaarka ah, labadaba goobta shaqada ama qolka mitirka.
Waxaan bixinaa xabadaha granite ee saxda ah oo leh xirmo ilaalinta ugu fiican, cabbirka iyo darajada saxda ah ayaa la heli karaa iyadoo loo eegayo codsigaaga.
Saldhig Dial ee Saxda ah ee Granite
Isbarbardhiga Dial ee leh Saldhigga Granite waa gage-barbardhiga nooca kursiga kaas oo si adag loogu dhisay shaqada iyo kormeerka ugu dambeeya. Tilmaamaha garaaca waxaa lagu hagaajin karaa si toos ah oo lagu xiri karaa meel kasta.
Saxanka Granite Cube, Epoxy Concrete, Saxnimada Granite Square Ruler, Granite saxda ah, Isbarbardhigga Granite Saxda ah, Mashiinka Dheelitirka Horizontal,